IdathaRobot: Iplatifomu yokuFunda yoMatshini oZenzekelayo weShishini | Martech Zone
IdathaRobot: Iplatifomu yokuFunda yoMatshini oZenzekelayo
NgoLwesibini, Oktobha 24, 2017 NgoLwesibini, Oktobha 24, 2017 Douglas Karr
Kwiminyaka eyadlulayo, kuye kwafuneka ndenze uhlalutyo olukhulu lwezezimali kwinkampani yam ukuze ndiqikelele ukuba ukunyuswa kwemivuzo kungayinciphisa imeko yabasebenzi, iindleko zoqeqesho, imveliso, kunye nokuziphatha kwabasebenzi ngokubanzi. Ndikhumbula ukubaleka nokuvavanya iimodeli ezininzi iiveki, zonke zigqiba kwelokuba kuya kubakho ukonga. UMlawuli wam wayengumfana ongaqhelekanga kwaye wandicela ukuba ndibuyele emva kwaye ndibaqwalasele elinye ixesha ngaphambi kokuba sithathe isigqibo sokuqhekeza umvuzo kumakhulu ambalwa abasebenzi. Ndibuyile ndaphinda ndawabuyisa amanani ... neziphumo ezifanayo.
Ndihambile uMlawuli wam ngeemodeli. Wajonga phezulu wabuza, “Ungabheja umsebenzi wakho kule nto?”… Wayezimisele. "Ewe." Sithe emva koko sanyusa esona sixa sisezantsi sabasebenzi bethu kwaye ukonga iindleko kuphindwe kabini apha enyakeni. Iimodeli zam zichaze impendulo eyiyo, kodwa bezikude nefuthe lilonke. Ngelo xesha, yayiyeyona nto ibalaseleyo endinokuyenza xa ndinikwa iMicrosoft Access kunye ne-Excel.
Ukuba bendinamandla ekhompyuter kunye namandla okufunda ngomatshini akhoyo namhlanje, bendiya kuba nempendulo ngemizuzwana, kunye noqikelelo oluchanekileyo lokonga iindleko ngempazamo encinci. IdathaRobot ngekhe ibengummangaliso.
IdathaRobot izenzekelayo kuyo yonke imodeli yokuphila, eyenza ukuba abasebenzisi bakhawuleze kwaye ngokulula bakhe iimodeli ezichanekileyo zokuqikelela. Izinto zokuphela ezifunekayo kukufuna ukwazi kunye nedatha- ukufaka iikhowudi kunye nezakhono zokufunda ngomatshini zikhethwa ngokuzithandela!
IdathaRobot liqonga labaFundi beNzululwazi yeDatha, abahlalutyi beShishini, iiNzululwazi ngeDatha, abaSebenzi, iiNjineli zeSoftware, kunye neeNgcali zeIT ukwenza, ukuvavanya, kunye nokuphucula iimodeli zedatha ngokukhawuleza nangokulula. Nantsi imbonakalo yevidiyo:
Inkqubo yokusebenzisa iDataRobot ilula:
Ngenisa idatha yakho
Khetha umahluko ekujoliswe kuwo
Yakha amakhulu iimodeli ngonqakrazo olunye
Jonga iimodeli eziphezulu kwaye ufumane ukuqonda
Sebenzisa eyona modeli intle kwaye uqikelele
NgokweDathaRobot, iinzuzo zabo zibandakanya:
ukuchaneka Ngelixa i-automation kunye nesantya zihlala ziza ngendleko zomgangatho, iDataRobot ihambisa ngokukodwa kuzo zonke ezo zinto ziphambili. IdathaRobot ikhangela ngokuzenzekelayo kwizigidi zokudityaniswa kwee-algorithms, amanyathelo okulungiselela idatha, uguquko, amanqaku, kunye nokulungisa iiparameter zemodeli efanelekileyo yokufunda umatshini wedatha yakho. Imodeli nganye yahlukile-ilungiselelwe kakuhle idathasethi ethile kunye nokujolisa ekujongeni.
isantya -IdathaRobot inezinto ezibonakalayo ezinokulinganisa imodeli enokuthi inyuke iye kumakhulu okanye kumawakawaka eeseva ezinamandla zokuvavanya, ukwakha kunye nokwenza iimodeli zokufunda ngomatshini. Idatha enkulu? Iseti yedatha ebanzi? Akukho ngxaki. Isantya kunye nokusilela kokumodareyitha kuncitshiswe kuphela kwizixhobo zekhompyuter zokulahla iDataRobot. Ngawo onke la mandla, umsebenzi obudla ngokuthatha iinyanga ngoku ugqityiwe ngeeyure nje.
Ukusebenziseka ngokulula Unxibelelwano olusebenzayo olusekwe kwiwebhu luvumela nabani na ukuba asebenzisane neqonga elinamandla kakhulu, ngaphandle kwenqanaba lesakhono kunye namava okufunda ngomatshini. Abasebenzisi banokutsala-kwaye-behlise emva koko bayeke iDataRobot ukuba iwenze wonke umsebenzi okanye banokubhala iimodeli zabo zovavanyo ngeqonga. Iimbonakalo ezakhelweyo ngaphakathi, ezinje ngeModeli X-Ray kunye neMpawu zoPhawu, zibonelela ngolwazi olunzulu kunye nokuqonda okutsha kwishishini lakho.
Inkqubo yendalo - Ukugcina kunye ne-ecosystem ekhulayo yoomatshini yokufunda ii-algorithms khange kube lula oku. IdathaRobot isoloko isandisa uluhlu lwayo lwee-algorithms ezahlukileyo ezivela kwi-R, Python, H20, Spark, kunye neminye imithombo, inika abasebenzisi iseti efanelekileyo yezixhobo zohlalutyo kwimiceli mngeni yokuqikelela. Ngokucofa nje ngokulula kwiqhosha lokuqala, abasebenzisi banokuhambisa iindlela abangazange bazisebenzise ngaphambili okanye abanokwazi.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza - Owona mzekelo ubalaseleyo wokuqikelela awunaxabiso lombutho ngaphandle kokuba uqhutywa ngokukhawuleza kwishishini. NgeDathaRobot, ukuhambisa iimodeli zoqikelelo kunokwenziwa ngonqakrazo olumbalwa lwempuku. Ayisiyiyo loo nto kuphela, yonke imodeli eyakhiwe yiDathaRobot epapasha i-REST API yokuphela kwayo, iyenza ibe yimpepho yokudibanisa ngaphakathi kwezicelo zeshishini zale mihla. Imibutho ngoku inokufumana ixabiso leshishini kufundo lomatshini ngemizuzu, endaweni yokulinda iinyanga ukubhala ikhowudi yokufumana amanqaku kunye nokujongana neziseko zophuhliso.
Ishishini-iBakala -Ngoku ukufunda komatshini kuchaphazela inani leenkqubo ezanda rhoqo, akusekho kukhetha ukukuphatha njengesixhobo somphuhlisi ngokhuseleko oluncinci, imfihlo kunye nokuqhubeka kwezokhuseleko. Ngapha koko, kubalulekile ukuba iqonga lokwakha kunye nokuhambisa iimodeli liqiniswe, linokuthenjwa kwaye lidibane kakuhle ne-ecosystem yeetekhnoloji kumbutho.
Cwangcisa iDemo ebukhoma yeDathaRobot
tags: aikukubhadla okungeyonyaniukufundwa komatshini ozenzekelayoUkungenisa idathaUkulungiselela kwangaphambili idathayesayensi yolwaziukubonwa kwedathaidatharobotiiseti zedathaifuthe lefutheh2oiiseti zedatha ezinkuluyokufunda umatshiniUmzekelo we-x-rayInjini yokumodelawokuxelaPythonrspark
Nceda ungaphenduli kwiSicelo seMidiya yoLuntu ngale ndlela
Iindlela ezi-6 eziHlaliswa ziihotele kwiiNdawo zokuThengisa kuFacebook